नारायणहिटी दरबारको पुनर्निर्माण कहिले ? – email khabar | Latest news of Nepal
नारायणहिटी दरबारको पुनर्निर्माण कहिले ?
प्रकाशित : २०७३ भदौ २६ गते २:५४
भदौ २६ ,काठमाडौं – भूकम्पले नारायणहिटी दरबारका पर्खालदेखि भवनसम्ममा क्षति पुर्‍याए पनि अहिलेसम्म निर्माण गर्ने सुरसार गरिएको छैन । दरबार सङ्ग्रहालयले एक वर्षअघि नै सरकारसँग रकम माग गरे पनि उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण कार्य थाल्न नसकिएको सङ्ग्रहालय प्रमुख रोहित ढुङ्गानाले बताए ।
उनका अनुसार मर्मत तथा निर्माण कार्यका लागि करिब २५ करोड रुपियाँ माग गरिएको छ । भूकम्पले दरबारको पूर्व, उत्तर र पश्चिमतर्फको पर्खाल लडाइदिएको छ । पर्खाल भत्किएपछि काँडे तारले बेरेर काम चलाइएको छ । सङ्ग्रहालय प्रमुख ढुङ्गानाले २।७ किलोमिटरमध्ये २।४ किलोमिटर पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पर्खालका लागि झन्डै आठ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पर्खाल २०४० सालपछि निर्माण गरिएको थियो ।
पर्खाल निर्माण भएलगत्तै राजा त्रिभुवनकी कान्छी रानी ईश्वरीको निधन पएपछि पश्चिमतर्फको पर्खाललाई काटेर शवयात्रा निकालिएको थियो । यसरी काटिएको स्थानमा पुनः पर्खाल निर्माण गरिएको थियो ।
दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गर्ने स्थानमा पनि पर्खाल भत्किदा त्यहाँ उम्रिएका झार हटाउन मिलेको छैन भने कतिपय स्थानका पर्खालमा अझै पनि टेको दिइएको छ । दक्षिणतर्फको फलामे बार अडेको पर्खाल पनि निकै कमजोर बनिसकेको छ ।
सङ्ग्रहालय प्रमुख ढुङ्गानाले फलामे बारलाई उभ्याइएको सानो पर्खाल कमजोर भएकोले कुनै पनि बखत ढल्न सक्ने भएकाले सडक यात्रुका लागि निकै जोखिम भएको बताए ।
भूकम्पले भत्काइदिएको दक्षिणतर्फको प्रवेशद्धार पनि पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सुरुमा नारायणहिटी दरबारको मुख्यद्वार नै त्यही थियो । त्यो द्वार राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीपको पालामा बनेको अनुमान गरिएको छ ।
दरबार परिसरमा रहेको रणोद्दीपको दरबार (बम्बै चोक) र राजा त्रिभुवनकी भित्रिनी सरलाको पनि दरबार पूर्ण रूपमा भत्किएको थियो । भूकम्पमा भत्किएका ती दरबारका अवशेष समेत पन्छाइएको छैन । उनले आर्थिक समस्याका कारण ती अवशेष पन्छाउन नसकिएको गुनासो गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव ‘नआउने’
मुदीबाट देखिएको हिमशृङ्खला